नेपालगञ्ज घटना प्रति मन्त्रि भट्टराईले दिए यस्तो स्पष्टिकरण
काठमाडौँ। शनिबार कैलालीको टिकापुरमा आयोजना गरिएको डल्फीन महोत्सवमा भाग लिई फर्कने क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईका कारण एक घण्टा जहाज रोकिएपछि विमानभित्रै उनीमाथि केही यात्रुहरुले आक्रामक शैलीमा गालि गलौज गरेको प्रति आफ्नो स्पष्टिकरण दिएका छन् ।
गालि गलौज सहितको भिडियो भाईरल बनेसँगै मन्त्री भट्टराईले शनिबार कार्यक्रम सकेर फर्कने क्रममा केही ढिला भई जहाज रोकिन गएको स्वीकार गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाट्स लेख्दै उनले अप्रत्यक्षरुपमा राजावादी पक्षधर विमानभित्रै आफूमाथि आक्रमक बनेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले शनिबार राति लेखेका छन् ‘आज कैलाली जिल्लाको टिकापुरमा आयोजना भएको डलफीन महोत्सबको कार्यक्रम सकेर बुद्ध एयरको धनगढीको अन्तिम उडानबाट काठमान्डौ फर्कने मेरो योजना रहेको थियो । तर कार्यक्रम ढिला भएको कारण बुद्ध एयरसँग अनुरोध गरेर नेपालगंजको अन्तिम उडानबाट काठमान्डौ फर्कनेक्रममा केहि ढिला हुन गएको सत्य हो । सबै यात्रुको बोर्डिङ भएको करिब १५ मिनेटमा हाम्रो टिमको बोर्डिङ भएको हो । भोली प्रतिनिधिसभामा माननीयहरुको प्रश्नको मैले जबाफ दिने कार्यक्रम रहेको कारण काठमान्डौ फर्कनै पर्ने दबाबमा म थिए । नेपालगंज बिमानस्थलमा ३/ ४ जना ब्यक्तीहरु आक्रमक शैलीमा मेरा बिरुद्ध प्रस्तुत हुनुभयो । एकजनाले पारसका बिरुद्ध सातलाख हस्ताक्षर दरबारमा बुझाएर तैले हामीलाई कति दु:ख दिएको छस् ? त्यो हामीले कहाँ बिर्सेंका छौ र ? सम्म भने ।त्यो सुने पछि उनीहरुको नियत मैले बुझिहाले । सम्पूर्ण यात्रु तथा बुद्ध एयरले देखाएको समझदारीप्रति धन्यवाद ब्यक्त गर्दछु ।
मेरा कारणले यात्रुहरुमा पर्न गएको असुबिधाप्रति भने क्षमाप्राथी छु ।'
उनले आफनो कारणले जहाज ढिला भएको भन्दै माफी पनि मागेका छन् । मन्त्री भट्टराईका कारण उडान ढिला भएको भन्दै भ्रष्टाचार बिरोधी अभियान्ता ज्ञानेन्द्र शाही लगायतका यात्रुहरुले अपशब्द प्रयोग गर्दै दुव्र्यवहार गरेका थिए ।
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईमाथी एयरपोर्टमा दुर्व्यवहार (भिडियोसहित)
आइतबारदेखि देशभरकै मालपोत कार्यालय खुल्ने
लकडाउनको मारमा गर्भवती
सांसद साहको अकुत संम्पती छानबिन गर्न राज्य मन्त्री यादवको माग
काेराेनाबारे उच्चस्तरीय समितिको बैठक सकियो, के के भयो निर्णय ?
एमसीसीको काउन्टरमा आयो एक अर्ब ५२ करोड आर्थिक सहयोग
चीन-भारत सिमा विवाद बैठक : पहिलो बैठकमै किन बिच्कियो भारत ?
'एमसीसी पास गरी छोड्ने' भन्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले ल्याए १५ बुँदे राष्ट्रघाती प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)